vendredi, 27 novembre 2015 11:26
Fitaterana : Mitaraina amin’ny halafosan’ny «permis biométrique» ny mpamily taxi
Lafo aminay ny 38.000 Ariary tsy maintsy aloa hanovana ny «permis» taloha ho «permis biométrique», hoy ny mpamily taxi. « Izahay tsy manohitra ny fanovana sy fanatsarana, fa ny sarany no ahenao » hoy izy ireo.
vendredi, 27 novembre 2015 10:22
Tanterahina ny 26,27 ary ny 28 novambra 2015 ny hetsika "Forum de métier" izay karakarain'ny orin'asa DHL sy ny SOS Villages d'Enfants etsy amin'ny Hôtel Panorama Andrainarivo.
Trano may Mahavoky Mahajanga
jeudi, 26 novembre 2015 22:37
Sary: Sobika Mahajanga
Mahavoky – Mahajanga : Trano roa sy fiara iray may kilan’ny afo
Tokony ho tamin’ny roa ambin’ny folo ora sy sasany teo no nisehoan’ny loza, izay tsy fantatra mazava hatreto ny fiandohany.
mercredi, 25 novembre 2015 16:08
Maty novonoin-drangahy tamin’ny antsy ny vadiny, namono tena izy avy eo
mercredi, 25 novembre 2015 16:04
Ampanihy : Ambalavelona
Ankizivavy mpianatra 15 indray voan’ny ambalavelonaVery hevitra ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny
mardi, 24 novembre 2015 19:19
Nanao fanandramana tetsy Ampefiloha sy ny manodidina ity fiara mpitroka rano an'ny kaominina ity, izany dia ny hanamorana ny fanalana ny rano eny amin'ny faritra iva.
mardi, 24 novembre 2015 14:29
Kiadin'i Madagasikara : Potika avokoa ny tahiry
May io maraina io tokony ho teo amin'ny valo ora sy sasany teo ny trano misy ny Kiadin'i Madagasikara etsy Amparibe. "Court-circuit" no voalaza ho nahatonga ny afo. Tsy nisy ny aina nafoy, ary tsy voakasiky ny afo ny teo amin'ny manodidina fa ireo tahiry rehetra no potika avokoa.
mardi, 24 novembre 2015 09:45
Foibe Kiadin'i Madagasikara Amparibe
May kila miaraka amin'ny fiangonana io maraina io ny foibe Kiadin'i Madagasikara Amparibe. Mbola miledaka ny afo ary vao ora iray teo ny mpamonjy voina no nihazo an'Amparibe. Mbola tsy fantatra mazava ny niandohan'ny afo.
mardi, 24 novembre 2015 07:45
Tarika Solomianadahy : Mankalaza ny faha-30 taonany
“COVER” na fihirana ny hiran’ny tarika amin’ny fomba itiavana azy no hanamarihan’ny tarika Solomianadahy ny faha-30 taona niorenany. Hetsika izay hitrandrahana ireo tanora handimby azy ireo izany ka ny 11 desambra 2015 ny famaranana. Nanomboka tamin’ny sabotsy teo ny fifanitsanana ka 10 mianadahy izy ireo no hiady ny ho mpandimby ny tarika. Anisany nahafantarana ny tarika Solomianadahy ny fivoizany ny gadona Osika izay gadona mampiavana an’Antsihanaka.
lundi, 23 novembre 2015 16:24
Nontanterahina teny amin'ny le Pavé Antaninarenina ny Fivoriam-be fanaon'ny Ministeran'ny fiompiana isam-bolana izay tafiditra ao anatin'ny fijerena ireo zava-bita sy ny tokony hanatsarana ny asa.
Page 618 sur 638